Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Akụkọ nwata Karim Adeyemi gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Anyị Karim Adeyemi Biography na-egosi Eziokwu banyere akụkọ nwata ya, mmalite ndụ, nne na nna (Abbey na Alexandra), ndị òtù ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ga-abụ na ụmụnne ya.
Nke ka nke, ụdị ndụ, ndụ onwe onye na ihe efu nke Baller nke nwere Mmalite Naijiria.
N'okwu dị mfe, ihe ncheta a bụ gbasara akụkọ ndụ nke Karim Adeyemi.
Ọ bụ akụkọ banyere onye naanị ya kpọrọ asị ịga ụlọ akwụkwọ (dị ka nwata), na Bayern Munich nyere obi mgbawa (chụpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ha) nanị n'ihi nghọtahie.
Ụdị ndụ anyị nke Karim Adeyemi na-amalite site na mmalite egwuregwu bọọlụ ya na Munich (Germany) na Ibadan, (Nigeria).
Anyị na-aga n'ihu ịgwa gị nsogbu ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Bayern Munich na ihe o mere iji nwee ọganihu na egwuregwu mara mma nke football.
Ugbu a, iji mee ka akụkọ ndụ gị nwee agụụ maka mmekọ nke Karim Adeyemi's Bio, ndị otu anyị achọpụtala na ọ dabara adaba igosi gị ụlọ ngosi ihe ịga nke ọma nke Nwa nwoke ya.
Nke a bụ akụkọ akụkọ Lifebogger nke ndị egwuregwu bọọlụ German.
Eziokwu Biography Karim Adeyemi - Akụkọ Na-adịghị Anya.
Ee, anyị na-atụle ya n'akụkụ Jamal Musiala na Kai Havertz dị ka ọdịnihu German football. Anyị niile maara na onye ọkpọ ahụ na-adị ngwa ngwa, na-enwe nnukwu mgbawa nke osooso, aghụghọ bọọlụ na anya ọkachamara maka isi ihe mgbaru ọsọ.
N'agbanyeghị otuto dị n'ụdị egwuregwu ya, anyị na-achọpụta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị na-akwado football ka gụchara ihe omimi nke Karim Adeyemi's Biography.
Anyị akwadola ya - maka ịgụ akwụkwọ gị ụtọ. Ugbu a, na-egbughị oge gị ọzọ, ka anyị gwa gị gbasara akụkọ Baller.
Akụkọ nwata Karim Adeyemi:
Maka ndị mbido biography, ọ na-ebu aha zuru oke - Karim-David Adeyemi. A mụrụ ya na 18th ụbọchị nke Jenụwarị 2002, nne ya, Alexandra Adeyemi, na nna, Abbey Adeyemi, na obodo Munich, Germany.
Dị ka nchọpụta nwere ike isi kwuo, ndị ọkachamara ọkachamara German bụ nanị nwa, nke a mụrụ site na njikọ gọziri agọzi n'etiti papa ya na mama anyị bụ ndị anyị na-ese onyinyo ebe a.
Lee, nne na nna Karim Adeyemi - ndị mmadụ pụtara ụwa nye ya, na ndị ọ nweghị ike ịre ahịa maka ihe ọ bụla.
Nke a bụ nne na nna Karim Adeyemi. Aha nne ya bụ Alexandra, ebe nna ya bụ Abbey.
Onye na-agba ụkwụ German nwere nzụlite ya na ezinụlọ ọtụtụ agbụrụ. Malite na, nna Karim Adeyemi bụ onye Naijiria.
Obodo Abbey si na Naijiria bụ Ibadan. Nne Karim Adeyemi (Alexandra Adeyemi), n'aka nke ọzọ, bụ onye Romania.
Mpaghara Forstenried, mpaghara dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke obodo Munich, bụ ebe Adeyemi nọrọ ọtụtụ afọ n'oge ọ bụ nwata.
Yiri onye egwuregwu bọọlụ France Aurélien Tchouaméni, Afọ nwata ya gbadoro ụkwụ n'ọchịchọ iji gbapụta nna ya furu efu na football.
Mgbe ọ bụ nwata, Karim dị ezigbo nso na Nkịta ya - onye na-ehikarị ụra n'elu akwa ya. Nwatakịrị nwoke ahụ nwekwara enyi na-alụbeghị di ọ hụrụ n'anya ka ya na ya nwee.
N'ihi ịhụnanya maka football, Karim mere ka ndị mụrụ ya zụta ya kapeeti ahịhịa - nke nwere ahịrị egwuregwu bọọlụ.
Mgbe a jụrụ ya, Karim kwuru na ya na-echeta nke ọma mgbe mbụ ọ gbara bọọlụ, ikekwe na abụọ - mgbe nna ya nyere ya bọọlụ n'ime nwa. Ọ maghị na papa ya na-enyefe ya ahịa ya.
Ihe ndabere ezinaụlọ Karim Adeyemi:
Mmetụta football na-esite na ezinụlọ nke etiti nke mmasị football na-agafe na onye ọ bụla.
Anyị na-ekewa ndị nne na nna Karim Adeyemi dị ka ndị na-abaghị ọgaranya, ma ụdị obi ụtọ nke bi n'otu n'ime mpaghara ndị dị na Munich's Forstenried district.
David Alaba Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Egwu
Malite na mama ya, ọ gụrụ akwụkwọ nke ọma - Geographer.
Alexandra Adeyemi bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Bucharest (Romania), ngalaba nke Geography (Facultatea de Geografie). Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ wee bịa Germany, ọ nwetara ọrụ na SpVgg Unterhaching.
Otu nne na nna Karim Adeyemi siri zute:
Nzukọ Alexandra na Abbey bụ nke Chukwu, o nwekwara ihe jikọrọ ya na ịkpa ókè agbụrụ na football.
N'afọ 1990, nna Karim Adeyemi hapụrụ Ibadan (na Nigeria) ịga gbaa bọọlụ na Germany. Ọ gara mba ahụ, ọ bụghị dị ka onye na-eto eto kama dị ka onye na-agba ọsọ oge.
Na Germany, Abbey Adeyemi chere ihu, ọ bụghị naanị ịkpa ókè agbụrụ, mana eziokwu ahụ bụ na ọ nweghị ike imezu ihe ndị ọkachamara n'ịgba bọọlụ chọrọ.
Mgbe ọ dị afọ 30, o chere na ya emewo agadi nke na ya apụghị ime ya n'egwuregwu ahụ. N'ụzọ dị mwute, papa Karim Adeyemi hapụrụ football.
Mgbe ọ lara ezumike nká, Abbey gara n'ihu ibi na ala ịta ahịhịa nke Munich ebe ọ na-enweta ihe eji ebi ndụ na-arụ ọrụ dị iche iche na-akpata ego.
N'obodo ahụ, nne Karim Adeyemi, bụ́ nwanyị nke kpakwara ịkpa ókè agbụrụ, bi. Ha abụọ zutere, kesaa ahụmahụ ha, ma nwee ịhụnanya na usoro ahụ.
Achọ imezu nrọ ezinụlọ:
N'ịtụgharị uche na ahụmahụ dị mwute nke ọrụ football na-ada ada, otu ihe doro anya maka nna Karim Adeyemi (Abbey).
O kwere nkwa ime ka nwa ya nwoke (Karim) dịrị ndụ, nrọ football ezinụlọ. Iji kwadebe ya, papa m nwere nchekwube, buru ụzọ kwe ka obere Karim gaa Nigeria.
Echiche ime njem na West Africa abụghị naanị maka ịmatakwu ndị ezinaụlọ (Uncles, Aunties, Cousins, Ụmụ nwanne, Ụmụ nwanne na nne ochie wdg).
Maka Abbey, ọ bụ maka ijide n'aka na nwa ya nwoke na-eme ka nkà football ya na-agba ọsọ n'okporo ámá ndị siri ike nke Ibadan - ebe ọ malitere ọrụ nke ya.
N'ịbụ onye yi uwe elu Bayern Munich, Karim Adeyemi mụtara football na ala siri ike nke obodo Yoruba.
Laa azụ n'oge ahụ, nwa whiz buru ibu ga-enwe ndị na-akwado ya (nọdụ n'akụkụ okporo ụzọ), na-enwe mmasị na njikwa bọọlụ ya dị egwu na ikike nke ịfefe ndị iro ya.
Foto nwata dị ụkọ nke Karim Adeyemi. A hụrụ ya ka ọ na-agba bọọlụ n'okporo ámá n'obodo Ibadan, Nigeria.
Mgbe Karim Adeyemi na-esoghị ndị mmadụ egwu egwu, ọ na-enwe mmasị ịzụ naanị ya - n'okporo ámá ndị na-enweghị atụ nke Ibadan, Nigeria.
Ọ lere vidiyo nke Ronaldinho ma jiri oge dị ka nke a nweta ọtụtụ nkà - ihe ngosi nke kọwara onye na-agba bọọlụ ọ mechara bụrụ na ndụ.
Ọ na-ekiri vidiyo Ronaldinho ma jiri nke ahụ mee ka nkà dribbling ya dịkwuo mma.
Ezinụlọ Karim Adeyemi:
N'ihi nna nna ya na nna nna ya, anyị na-amata ndị egwuregwu bọọlụ n'ụzọ atọ.
Nke mbụ, Karim Adeyemi bụ onye German-Nigeria – n’ihi ezinaụlọ nna ya bụ Naijiria. Nke abuo, ọ bụ onye German-Romanian - ekele maka mgbọrọgwụ Romanian mama ya.
Nnyocha ọzọ emere iji chọpụta ezinụlọ Karim Adeyemi na-egosi obodo (na Romania na Nigeria) ebe nne na nna ya si.
Anyị amaralarị Ibadan dịka obodo nna ya (Abbey). Nne Karim Adeyemi (Alexandra) si Brașov, obodo dị na Romania.
Nke a bụ Ibadan na Brașov. Ọ kọwara ezinụlọ Karim Adeyemi si. Nna ya si Ibadan, ebe nne ya si Brasov.
Agbụrụ Karim Adeyemi dịka ọ gbasara nna ya na nne ya bụ otu abụọ. Ha bụ asụsụ ndị Naijiria (n'akụkụ nna ya) na Romania (ebe nne ya si ).
Nke mbụ bụ agbụrụ Yoruba, nke ndị Ibadan bi na ndịda ọdịda anyanwụ Nigeria na-asụ.
Ọzọ, bụ asụsụ Romani nke ndị ikwu ezinụlọ Karim Adeyemi bi na Brașov, Romania na-asụ. Ọ dịkwa mkpa ịmara na Karim na-asụkwa asụsụ German German.
Ibadan, ebe nna Karim si, dị na South-West Nigeria. Brașov - ebe nne ya - dị na Central Romania.
Mgbe oge ruru, Abbe na Alexandra debara aha nwa ha nwoke n'akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ bọl nke dabara n'ụdị ya. Karim Adeyemi gara ụlọ akwụkwọ Walter Klingenbeck.
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a dị na Taufkirchen egwuregwu na ogige ntụrụndụ na Munich. O nwere nnukwu ebe egwuregwu na nke ahụ kwadoro ọchịchọ Karim ịbụ onye egwuregwu bọọlụ.
Nke a bụ Karim Adeyemi ya na ndị enyi ụlọ akwụkwọ ya.
Walter-Klingenbeck-Schule - nke Karim gara - bụ ụlọ akwụkwọ bọọlụ mmekọ nke FC Bayern Munich. DFB akwadola ụlọ akwụkwọ bọọlụ dịka ụlọ akwụkwọ nkuzi maka bọọlụ ụmụaka.
Mgbe ọ bụ nwata, nwata ahụ enweghị mmasị n'ụlọ akwụkwọ, omume a na-esokwa ya ruo mgbe ọ dị afọ iri na ụma. Ọ na-abụkarị echiche Karim Adeyemi imebi agụmakwụkwọ ya maka ọzụzụ football.
N'ịghọta ọchịchọ ya, nne na nna ya debara aha ya na TSV Forstenried.
N'ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ, Karim egbughị oge iji bụrụ ndị egwuregwu ụmụaka kacha ewu ewu. Site na mmeri a, nnukwu ụlọ ọgbakọ na Germany (Bayern Munich) nwetara ọkwa.
Akụkọ bọọlụ Karim Adeyemi:
Mgbe ọ nọ na TSV Forstenried, ọrụ ya nwetara mmasị nke Bayern Munich scouts, bụ ndị dụrụ nna ya ọdụ ka ọ kpọta ya maka ule.
Karim Adeyemi gafere na agba efe efe, na mgbe ọ dị afọ asatọ, ya na ndị ọzọ (ndị mere ya) debanyere aha n'akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Ị nwere ike ịhụ Karim Adeyemi na agba Bayern Munich?
Nwatakịrị ahụ jiri egwuregwu bọọlụ ọ nwere mgbe ọ bụ nwata mepụta mmalite dị mma na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Bayern Munich.
Ngọzi na ọsọ a na-apụghị ichetụ n'echiche maka afọ ndụ ya, Karim ghọrọ ụdị nwatakịrị a nke nwere ike ime ihe ọ bụla na bọl. N'ezie, ọ dịghị nwatakịrị pụrụ ịkụ ya n'ọsọ ọsọ.
Karim Adeyemi Bayern Munich Akụkọ - O nwere mmalite pụrụ iche na agụmakwụkwọ.
Ịdaba na nsogbu - Akụkọ jụrụ Bayern Munich:
Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ụmụaka ndị ọzọ nọ na ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ ghọrọ ihe siri ike nye Adeyemi. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi àgwà ya na nke ka ukwuu n'ihi enweghị mmasị nwata nwoke ahụ n'ụlọ akwụkwọ.
Ịga ụlọ akwụkwọ gaara enyere Karim aka, ọ bụghị naanị ịmụta, kamakwa soro ụmụaka ndị ọzọ na-akpakọrịta.
Site n'echiche football, Adeyemi na-eto eto bụ ihe pụrụ iche - dị mma karịa ọtụtụ ụmụaka. Otú ọ dị, mmetụta nke enweghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya mere ka onye nkụzi ya ghara ịghọta ya.
N'oge na-adịghị anya, esemokwu bilitere na ụlọ akwụkwọ mmuta Bayern Munich boro Karim ebubo enweghị ịdọ aka ná ntị.
Mmetụta nke ebubo dị otú ahụ mere ka ọ bụrụ ọdachi dị egwu nke ihe omume - na Karim Adeyemi bụ onye naanị ya mere ihe ọjọọ na onye a na-emegbu. N'inye mkpebi ha, Bayern Munich kwụsịrị ịhapụ nwata ahụ dara ogbenye na ụlọ akwụkwọ mmuta ha.
Akụkọ ndụ Karim Adeyemi - Njem a ma ama:
Onye ọ bụla na-agba bọọlụ na-achọsi ike nke biworo ndụ site na ịjụ ụlọ akwụkwọ mmuta maara ihe na-emebi emebi nke uche na ihe mgbu mmetụta uche na-abịa na ya.
Dị ka a tụrụ anya, nne na nna Karim Adeyemi mesiri ya obi ma kasie ya obi n'oge a siri ike nke ndụ ya.
N'ikpeazụ, enwere olileanya maka nwata ahụ, dịka ụlọ akwụkwọ mmuta ọzọ - na-adịghị anya site n'ebe obibi ezinụlọ ya - ji obi ya dum nabata ya.
Karim Adeyemi nwere obi ụtọ, mgbe ọ dị afọ 10, sonyeere SpVgg Unterhaching. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ mmuta bọọlụ dị na mpaghara ime obodo dị na mpụga ndịda Munich.
Ọ bụrụ na ị maghị, nne Karim Adeyemi (Alexandra) rụrụ ọrụ na SpVgg - n'oge ahụ.
Nke a bụ Karim Adeyemi ya na ndị otu ya na SpVgg Unterhaching. Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe nne ya na-arụ ọrụ - nke nabatara ya mgbe Bayern jụrụ ya.
Nkwekọrịta ahụ mere ka ọ nwee mmasị na Ụlọ Akwụkwọ:
Mgbe ọ dị ka ọ nweghị onye nwere ike ijikwa nwa nwoke ahụ, otu nwoke - aha ya bụ Manfred Schwabl ghọrọ onye gbanwere ndụ mmekọrịta Karim Adeyemi.
Nwoke a (nke dị n'okpuru ebe a) mere ka nwa nwoke ahụ nwee U-Turn mbụ, na mpaghara ịga akwụkwọ na nke abụọ, na mmekọrịta mmekọrịta.
Onye ndụmọdụ ụmụaka na onye bụbu onye ọkpọ egwuregwu West Germany kwuru ihe ọ hụrụ na Karim;
Manfred Schwabl jisiri ike Karim mgbe a tọhapụrụ ya na ụlọ akwụkwọ Bayern.
Mkpakọrịta mmekọrịta siri ike, nwa okoro ahụ enweghịkwa mmasị n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ya mere m ji lekọta Karim ntakịrị.
Iji mee ka ihe na-aga nke ọma, Manfred Schwabl na Karim gbara nkwekọrịta. Ọ gwara ya na onweghị ebe ọ ga-anọ na ụlọ akwụkwọ mmuta (SpVgg Unterhaching) ma ọ bụrụ na ọ gaghị agụ akwụkwọ. O nyere iwu na;
Ọ bụrụ na Karim anaghị eme ihe omume ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na ọ naghị eme akwụkwọ, a gaghị ekwe ka ọ zụọ ya.
Enyere m iwu ka amachibido ya egwuregwu ma ọ bụrụ na ozuteghị ọnọdụ ndị a.
Obi dị m ụtọ na nwa nwoke ahụ kwetara na nkwekọrịta ahụ. Na oge niile, Manfred Schwabl sochiri onye isi ụlọ akwụkwọ Karim Adeyemi na ndị nkuzi ya.
Ọ jụrụ ma ọ mere ihe omume ụlọ ya wee gaa klas. Nlebanya anya a hụrụ ka Karim mechara mebie akwụkwọ ya.
Obi ụtọ n'ikpeazụ maka nwata. Karim sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ football ebe a hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma mee ka ọ gụọ akwụkwọ ya.
Akụkọ ndụ Karim Adeyemi - Akụkọ ịga nke ọma:
Mgbe ọ gachara site na ngalaba ndị ntorobịa SpVgg, onye egwuregwu bọọlụ gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ ha na 2018.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Karim gosipụtara na A-Junioren-Bundesliga, na-agba akara na mpụta mbụ ya, ihe ngosi nke mere ka ọ kwaga ụlọ ọrụ Austrian - Red Bull Salzburg.
Na nke mbụ, Speedster hapụrụ ezinụlọ ya na Germany maka ndụ ọhụrụ na Austria.
N'ihi mkpa ọ dị ịchịkọta ahụmịhe football dị elu, Red Bull Salzburg gbaziri Karim maka mbinye ego ogologo oge na ụlọ ọrụ nri ha - FC Liefering.
N'ịlaghachi na mgbazinye ego, bọọlụ Karim Adeyemi gbawara na Salzburg. Ọ n'akụkụ kpakpando amasị Patson daka guzobe mmekọrịta dị egwu na Erling Haaland, onye mechara hapụ ọgbakọ German - Borussia Dortmund.
Na ndị dị ka Enock Mwepu, na-enye nkwado nke etiti etiti, ọ dịịrị Karim mfe, ọ bụghị nanị iji nweta ihe mgbaru ọsọ, ma bibie ndị egwuregwu na ndị na-eche nche na-emegide - dị ka a hụrụ na vidiyo a.
N'oge na-adịghị anya, ndị agadi trophies malitere ịwụba maka mmetụta nke afọ iri na ụma. Karim Adeyemi nyeere ya aka Red Bull Salzburg akụkụ (maka oge abụọ na-esochi) merie Austrian Bundesliga na Austrian Cup.
Akụkọ ịga nke ọma Karim Adeyemi na Red Bull Salzburg.
Germany U21 ebube:
N'ịbụ ndị nọchitere anya Germany na mbụ na U16 na U17s, Karim's Salzburg ebili mere Stefan Kuntz (onye nchịkwa German U21) kpọrọ ya maka asọmpi UEFA European Under-21. Maa amụma! Adeyemi na ndị otu ya meriri ụwa iji merie ya.
Akụkọ ịga nke ọma Karim Adeyemi - asọmpi UEFA Under-21.
Oku mba German:
Mgbe Aha ya bụ Florian Wirtz kpọọ ndị otu mba site Joachim Low, Onye ọ bụla maara na Karim na-esote akara - na-agbaso ọrụ ya dị egwu na Red Bull Salzburg.
Onye njikwa German ọhụrụ (Hansi-Dieter kpatụ aka gaa) mechara kpọọ ya ka ọ bụrụ otu mba na Septemba 2021.
Karim batara dịka onye nọchiri anya ya Serge Gnabry n'asọmpi ntozu FIFA World Cup megide Armenia.
N'ime obi ụtọ nke ezinụlọ ya, kpakpando na-ebili mere ihe mgbaru ọsọ 6th na egwuregwu ahụ. Lelee oge agaghị echefu echefu nke ga-adịru mgbe ebighị ebi n'uche Adeyemi.
Site n'ịkpọ ndị otu mba German, Karim Adeyemi (ebe ọ bụ na oge agha gasịrị) ghọrọ onye mbụ na-agba ọsọ site na ụlọ ọrụ Austrian iji nweta ihe a.
Hapụ naanị inye akara na mpụta mbụ ya - n'oge mmerụ ahụ. Nke ahụ na-etinye ya na njedebe nke nnukwu mmegharị - dị ka DW si kwuo.
Lee oge mpako maka ezinụlọ Karim Adeyemi. Na-anọchite anya Germany na akara na mpụta mbụ ya - Niile mgbe ọ dị afọ 19.
Ee, ndị na-akwado football nọ na njedebe nke ịgba akaebe na-esote Arjen Robben - na-akwalite ụzọ ya ka ọ bụrụ onye ọkpọ egwuregwu ụwa.
Karim Adeyemi bụ n'ezie otu n'ime ihe kachasị mma, na usoro mmepụta nke Germany. Akụkọ ndụ ya ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Karim Adeyemi na-akpa?
N'ịbụ onye mere onwe ya aha na football, ọ bụ ihe dị mma maka ndị Fans ịjụ ajụjụ onye enyi nwanyị Baller nwere ike ịbụ.
Iji mezuo nke a, anyị na-ajụ ajụjụ kacha - onye bụ Karim Adeyemi enyi nwanyị? … O nwere nwunye?
Ọnye na-bụ Karim Adeyemi na-akpa? O nwere enyi nwanyị?
Ee, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ọ bụla na ihu nwa ya mara mma, ịma mma na ọganihu football agaghị adọta ụmụ nwanyị ndị ga-arọ nrọ ịghọ enyi nwanyị Karim Adeyemi, nwunye, ma ọ bụ / na nne nke ụmụ ya.
Mgbe emechara nyocha siri ike na ịntanetị, anyị na-achọpụta na gburugburu 2017, enwere nwanyị na ndụ ya. Ugbu a, nke a nwere ike ịbụ enyi nwanyị Karim Adeyemi?… eleghị anya.
Karim Adeyemi tinyere foto nke onwe ya na ihe dị ka enyi ya nwanyị n'ụbọchị 1st nke Septemba 2017.
Kemgbe ụbọchị 1st nke Septemba 2017, onye ọkpọ ahụ emelitebeghị ndị fan ya gbasara ọnọdụ mmekọrịta ya.
O nwere ike ịbụ na Karim Adeyemi na enyi ya nwanyị a na-ebo ebubo ekpebiela ime ka mmekọrịta ha dị ala. Ma ọ bụ naanị ma eleghị anya, ọ dịghịzi onye na-akpa.
Ndụ onwe onye Karim Adeyemi:
Akụkụ a nke akụkọ ndụ anyị na-ekpughere eziokwu gbasara ụdị onye ọ bụ. Ugbu a ajụjụ - N'èzí ihe niile ọ na-emere anyị na pitch, onye bụ Karim Adeyemi?
Nke mbụ, ọ bụ onye na-enwe ahụ iru ala n'ụdị nke ya. Ndị enyi Karim na-akọwa ya dị ka onye dị jụụ, dị jụụ na nchịkọta.
Apụ na football, ọ hụrụ n'anya ịnọ n'ebe kwesịrị ekwesị, ọ dịghị mgbe ọ na-abanye na nsogbu. Karim na-ebi ndụ nkịtị nke gbadoro ụkwụ na uto ọrụ ya.
Ndụ nkeonwe Karim Adeyemi – KỌWAA.
Mgbe ị na-ahụ Karim (n'oge okpomọkụ) n'èzí ụlọ ya, ị nwere ike ịhụ na ọ na-eyi ugogbe anya maka anwụ kachasị amasị ya.
Ọ na-eyi ya ọbụna ka ọ na-eme ọzụzụ - na mpaghara ya. German Nigerian bụ onye kwenyere na ọ kwesịrị ịdị mma (mgbe niile) na ihe ọ na-eme.
Karim hụrụ ugogbe anya maka anwụ n'anya n'ihi na ọ na-egbochi ụzarị UV ka ọ ghara ịbanye n'anya ya mara mma ngwa ngwa.
Ndụ Karim Adeyemi:
Laa azụ n'oge ahụ, ndị mmadụ na-akọwa ya dị ka onye na-anọ naanị ya, onye na-ekwukarị okwu. N'ezie, ị ga-akparị Karim Adeyemi ma ọ bụ mee ihe pụrụ iche iji mee ka ọ nwee mmekọrịta.
Ụbọchị ndị a, ihe agbanweela na ụzọ ndụ ọhụrụ ya na-egosi onye na-ahụ n'anya ka ya na ndị enyi na-akpakọrịta na nke ọma.
Karim anaghịzi enweta obi ụtọ na afọ ojuju site na ịnọ naanị ya - nke o mere n'oge ya na ụlọ akwụkwọ mmuta Bayern Munich.
Oge ochie nke ịnọ naanị ya agaala. Ọkachamara ndị egwuregwu bọọlụ German na-agbatị aka ya na ọbụbụenyi.
Ụgbọ ala Karim Adeyemi - kedu ihe ọ na-anya?
N'adịghị Maxwel Cornet, ị gaghị ahụ ya ka ọ na-eri nri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ posh. Mana ị ga-ahụrịrị Karim n'ụgbọ ala Toyota ya ka ọ na-alọta ọzụzụ wee kwụsị ịbanye na autographs. Ndị na-agba ụkwụ enweghị akpa Gucci, ma ọ bụ edozi isi - ma obi dị mma.
Anyị ma ụgbọ ala Karim Adeyemi n'oge ọ bịanyere aka n'akwụkwọ akụkọ maka onye na-akwado Salzburg.
Kedu ihe omume enyi na ihe ịrịba ama nke ọdịdị ala ya n'ụwa. Karim Adeyemi mere onye na-akwado Salzburg obi ụtọ ka ọ na-ebugara ya uwe aka aka.
Àgwà a nke ịla azụ inye arịrịọ autograph na-eme ka ị hụtụ àgwà ịdị umeala n'obi ya.
Ime ndị mmadụ obi ụtọ bụ ọgwụ ndị na-agba bọọlụ kwa ụbọchị.
Ndụ Ezinụlọ Karim Adeyemi:
Mgbe ihe na-agara ya na Bayern Munich, papa ya na mama ya bụ ndị kacha akwado ya.
Akụkụ a nke Bio anyị na-agwa gị ọtụtụ ihe gbasara nne na nna Karim Adeyemi yana ndị ezinaụlọ ndị ọzọ. Ka anyị malite na Abbey - onye isi ezinụlọ.
Banyere Karim Adeyemi Nna:
Abbey bụ nwoke hụrụ mgbọrọgwụ ezinụlọ ya n'anya, ma mee ka nwa ya nwoke nabata ya - n'oge ndụ ya. Nke a bụ nwoke tara ahụhụ nke ukwuu ịkpa ókè agbụrụ na Germany.
N'oge Karim bụ nwata, Abbey mere ka ọ ghọta ọnọdụ ahụ ma kwadebe ya.
N'ikwu banyere otu nna ya si kụziere Karim ka ọ ga-esi meghachi omume na ịkpa ókè agbụrụ, Karim kwuru;
Karim Adeyemi na-ese foto ya na nna ya n'ụbọchị nke mbụ Die Mannschaft ya.
Ee, mgbe m bụ nwata, a na-enwekarị ịkpa ókè agbụrụ. Nne m tara ahụhụ site na ya karịsịa.
Papa m kwadebere m maka nke a n'oge. Na m kwesịrị igosi onye ahụ, na nke mbụ, ọ bụghị ịgwa m okwu ịkpa ókè agbụrụ.
Ọ bụrụkwa na onye ahụ emee ya ọzọ, mụ na ya nwere ike ịgbarịta ụka. Ọ dabara nke ọma, ahụtala m nke a naanị otu ugboro na ndụ m.
Banyere nne Karim Adeyemi:
Ọ bụrụ na ịmaghị, Alexandra bụbu onye na-eme egwuregwu - dịka Abbey. Nne Karim Adeyemi so na egwuregwu skating n'oge ọ bụ nwata.
Alexandra dị ihe dị ka afọ 40 (n'oge e dere Bio nke a), a mụrụ ya na Brasov, Romania.
Nne Karim Adeyemi na-eso ụzọ nwa ya nwoke ji mpako dị ukwuu. Nnyocha na-egosi na ọ na-elekọta ụmụaka football maka SpVgg Unterhaching. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ mmuta nke nabatara nwa ya nwoke mgbe Bayern Munich tọhapụrụ ya.
Nke a bụ Alexandra, Karim Adeyemi Nne. Ọ na-enwe obi ụtọ ịhụ ka nwa ya nwoke na-egwuri egwu maka otu mba Germany - na nke mbụ ya.
N'otu aka ahụ dị ka ụzọ di ya si echezọ ebe mmadụ si, Nne Karim Adeyemi mekwara ka nwa ya nwoke mara na ezinụlọ ya na Romania.
Mgbe ọ bụ nwata, Karim na-eletakarị ebe a mụrụ ya, Brasov, na obi nke ugwu Carpathian. Onye egwuregwu bọọlụ gara n'ihu na-ejigide okwu Romania ole na ole ruo taa.
Dị ka Karim si kwuo, asụsụ nne ya yiri Spanish n'ihi mmalite Romance. Ọtụtụ okwu ndị Romania na-ekwu nwere ngwụcha na leta U.
N'ikwu okwu banyere njikọ siri ike nke Alexander na mmalite ya (Romania), Super Mum kwuru otu oge;
Mụ na Romania na-enwekwa mmekọrịta siri ike. Ọ bụ ụlọ m. Nne nne Karim ka bi na Brasov.
Dị ka ihe ịrịba ama nke ịhụnanya dị ukwuu o nwere maka obodo ya, ihe kacha amasị Alexandra bụ ịhụ àgwà Romania maka iko mba ụwa nke FIFA. Oge ikpeazụ ha mere nke ahụ bụ na 1998.
Ndị ikwu Karim Adeyemi:
N'ezie, n'iji obi ike na pasentị narị, onye egwuregwu bọọlụ German agbasala ezinụlọ n'obodo Yoruba oge ochie nke Ibadan, Nigeria. Ndị a bụ ndị si n'akụkụ nna ya (nne nna, nwanne nna, nwanne nne wdg) ndị ọ gara leta mgbe ọ bụ nwata.
N'ikwu okwu banyere ndị ikwu nne Karim Adeyemi (na Romania), onye nọ ya nso ka bụ nne nne ya. Ọ bi na Brasov - n'oge ederede.
Banyere Karim Adeyemi Ụmụnna:
Nsonaazụ sitere na nyocha na-egosi na Baller nwere ike ịbụ naanị nwa nwoke nne na nna ya nwere.
O nwechaghị akwụkwọ gbasara ịdị adị nke onye na-akọwa onwe ya dịka nwanne ma ọ bụ nwanne Karim Adeyemi. Anyị ga-ezigara gị maka mmelite na nke a.
Karim Adeyemi Eziokwu:
N'akụkụ ikpeazụ nke akụkọ ndụ a, anyị ga-agwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara talent sitere na Unterhaching onye na-eme ka ọganihu na azụmahịa nke ndị ntorobịa football. Na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Eziokwu # 1 – Tụnyere ụgwọ ọnwa Karim Adeyemi na nkezi ụmụ amaala Nigeria na Romania – Obodo nne na nna ya:
Nke mbụ, anyị na-eji tebụl a iji nye Red Bull Salzburg nbibi nke ego ọ nwetara.
Ụgwọ ọnwa Karim Adeyemi Red Bull Salzburg na Euro (€) - 2021 stats.
Ụgwọ ọnwa Karim Adeyemi Red Bull Salzburg na Romanian RON - stats 2021.
Karim Adeyemi Red Bull Salzburg ụgwọ ọnwa na Nigerian naira (₦) - 2021 stats.
Kwa Afọ: € 677,040 3,349,520 nde ₦ 318,093,688
Ọnwa kwa: € 56,420 279,126 nde ₦ 26,507,807
Kwa Izu: € 13,000 64,314 nde ₦ 6,107,789
Kwa ụbọchị: € 1,857 2,679 nde ₦ 872,541
Oge Awa ọ bụla: € 77 111 nde ₦ 36,355
Nkeji ọ bụla: € 1 1.8 nde ₦ 605
Sekọnd ọ bụla: € 0.02 0.03 nde ₦ 10
Na obodo nne ya, nkezi Romanian nke na-eme 3,300 RON kwa ọnwa ga-achọ afọ 19 iji kwụọ ụgwọ ya na Red Bull Salzburg.
Ebe, na obodo Karim Adeyemi si Africa, nkezi Naijiria na-enweta ₦150,000 naira kwa ọnwa.
Nwa amaala dị otú ahụ ga-achọ afọ 3 na ọnwa 4 iji mee ihe Karim na-enweta kwa izu na Red Bull Salzburg.
Kemgbe ị malitere ile Karim Adeyemi's Bio, nke a bụ ihe ọ rụgoro na Red Bull Salzburg.
Eziokwu #2 - Otu o siri mụta ịgba ọsọ ọsọ:
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na ọ na-agba ọsọ nke ukwuu. N'ajụjụ ọnụ na nso nso a, Karim Adeyemi mere ka ọ pụta ìhè banyere mmalite nke ijeụkwụ ya. Ọ sịrị;
Mgbe m bụ nwata, mụ na mama m na-agakarị ịgba ọsọ. Ọ na-abụkarị ihe nne na nwa. Nke ahụ bụ ebe ọsọ m si abịa.
Eziokwu #3 - Profaịlụ Karim Adeyemi:
Osooso, ọsọ, na ike na ịwụ elu bụ akụ ya kachasị ukwuu - ma na ndụ n'ezie na na FIFA.
N'ihe banyere mmegharị, Karim bụ nke ukwuu tụnyere Jeremy Doku (Belgian n'ihu), Ismaila Sarr (Senegal n'ihu) na Rafael Leao (Portuguese n'ihu).
Eziokwu #3 - Okpukpe Karim Adeyemi:
German nwere ngwakọta nke ma aha Ndị Kraịst na nke Arabic - nke na-ahapụ mgbagwoju anya maka okwukwe ọ bụ.
Nchọpụta nyocha na webụ na-arụtụ aka n'okpukpe Karim Adeyemi dị ka Islam - yiri nna ya. N'aka nke ọzọ, mama ya (Alexandra) bụ Onye Kraịst.
Tebụlụ dị n'okpuru na-achịkọta profaịlụ Karim Adeyemi. Jiri nke a nweta ozi gbasara Biography ya.
Aha zuru ezu: Karim-David Adeyemi
Ụbọchị ọmụmụ: 18th January 2002
Age: 20 afọ na ọnwa 0.
Ndị nne na nna: Alexandra Adeyemi (Nne) na Abbey Adeyemi (Nna)
Ezinụlọ si malite: Nigeria (Site n'akụkụ Nna) na Romania (si n'akụkụ nne)
Obodo Naijiria na Steeti Mmalite: Ịbada (Oyo State)
Mgbọrọgwụ Romanian: Brașov, (Central Romania)
Education: Ụlọ akwụkwọ Walter Klingenbeck, Munich
Ọrụ Nna: Onye egwuregwu bọọlụ lara ezumike nka
Nationality: German, Nigerian na Romanian
Ọrụ Mama: Geographer na Roller skating Onye nkuzi
Ebe o toro: Mpaghara Forstenried, Munich, Germany
elu: 1.80 mita ma ọ bụ 5 ụkwụ 11 sentimita asatọ
Ezigbo Net: Nde Euro 1.5
Ụlọ akwụkwọ bọọlụ: TSV Forstenried, Bayern Munich na SpVgg Unterhaching
Abbey, nna Naijiria na Alexandra, onye Romanian Mama, bụ nne na nna mpako nke Karim Adeyemi. Onye German nọrọ afọ ndụ ya n'ụlọ ochie ya, na mpaghara Forstenried, mpaghara Munich. O tolitere dị ka nwatakịrị dị jụụ nke na-adịghị amasị ụlọ akwụkwọ na mmekọrịta.
Ọ na-esiri Abbey Adeyemi ike ịnagide ọdịda o nwere dị ka onye na-agba bọl. N’ihi nke a, o kwere nkwa ime ka nwa ya nwoke nọgide na-ebi ndụ nrọ ya. Nzọụkwụ mbụ nke egwuregwu ahụ malitere ozugbo site n'ụlọ ezinụlọ ha Munich - mgbe nwata ahụ ka nọ na nwata.
N'ime ala siri ike nke Ibadan, Nigeria - obodo nke ezinụlọ nna ya, Karim Adeyemi's Papa mere ka ọ kwalite nkà ịgba bọl na nkwadebe maka ọdịnihu ya. Nne ya, bụ́ Alexandra, duuru ya n'ịgba skating, nke ahụ na-egosikwa ya mere o ji na-agba ọkụ.
Na TSV Forstenried, Adeyemi nwetara akwụkwọ agụmakwụkwọ mbụ ya. Mgbe ha meriri ụfọdụ nsọpụrụ na ha, ndị Scout si FC Bayern Munich mara ngwa ngwa banyere nwa nwoke ngwa ngwa na aghụghọ. Nke ahụ mere ka ọ banye na ụlọ akwụkwọ mmuta nke nnukwu ụlọ ọrụ na German football.
N'ụzọ dị mwute, obere Karim nọ na akwụkwọ na-ezighị ezi na ụlọ akwụkwọ Bayern Munich tupu ata ahụhụ ihe anyị na-akpọ obi mgbawa.
Ụlọ ịgba egwu nwata ọ hụrụ n'anya na-ahapụ ya - na-ekwu maka nsogbu omume. Otú ọ dị, ka otu ọnụ ụzọ mechiri, ọzọ meghere nwa ahụ.
Ọ dabara nke ọma, Karim Adeyemi Mum ebe ọrụ SpVgg nabatara ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Manfred Schwabl nyeere ya aka itolite ịhụ ụlọ akwụkwọ n'anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke ahụ gbanwere ndụ Karim Adeyemi ruo mgbe ebighị ebi.
Daalụ maka ịgụ otu n'ime ihe ịchọ mma bọọlụ Germany na-ekwe nkwa. Na Lifebogger, anyị na-agba mbọ mgbe niile maka izi ezi na izi ezi mgbe anyị na-ebuga akụkọ ịgba bọọlụ German.
Jiri obiọma mee ka anyị mara ma ị hụ ihe na-adabaghị na akụkọ ndụ Karim Adeyemi. Anyị ga-enwekwa ekele maka echiche gị banyere ya na ngalaba nkọwa.
Akwụkwọ akụkọ bọọlụ Red Bull Salzburg